Ilhaan iyo Rashida : Hablaha Muslimiinta ah ee galaya Aqalka Congress-ka Maraykanka - BBC News Somali
Go'aankaas horay ayay Ilhaan Cumar oga hortimid, waxayna sheegtay in ay la dagaalami doonto Trump sida uu faafiyay taleefishinka CNN.
Xilligii uu ololaha doorashada ku jiray, sanadkii 2016-kii, Trump ayaa laga soo xigtay haddalo lid ku ah Soomaalida, wuxuuna yiri "Halkan Minnesota, waad aragteen dhibka ka dhashay nidaamka qaabilaada qaxootiga, tiro badan oo qaxooti Soomaali ah ayaa gobolkan yimid idinka oo aanan ka warhaynin, islamarkaasna aanan ogolaanin".
Waxyar kadib markii ay ku guuleysatay codad gaaraya 48%, ayay tiri "Waxaan biloownay olole aan ku cadaynayno in dadka ay diyaar u yihiin in ay u dagaalaan in la helo America dadka oo dhan u shaqayso, qof kasta oo ka qeybqaatay hawshan, guusha isagaa leh, wadajir ayaan degmadeena horey ugu marin karnaa".
Wargeyska Israa'iil kasoo baxa ee Haaretz ayaa soo qorey in Ilhaan horey looga xigtay haddalo ay ku garab istaagayso dadka reer Falastiin, islamarkaasna ku cambaareynayso xad gudubyada Israa'iil.
Sida uu tabiyay taleefishinka CNN, Ilhaan Cumar ayaa dowladda Israa'iil ku tilmaamtay 'midab takoor'.
Rashida ayaa ka hambalyaysay guusha Ilhaan, waxayna tiri "Ma sugi karo in aan arko labadeena oo gacmaha is haysta, oo Aqalka Congress-ka dhex joogna".
Waxa ay u muuqataa in labaduba ku baraarugsanyihiin baahiyaha dadka ay matalaan, iyo culeeska mas'uuliyadda fuushay ay leedahay.
Dowladda Maraykanka ayaa ah saaxiibka ugu weyn ee Israa'iil, inkasta oo marar badan ay hawlo dhexdhexaadin labada dhinac ka gashay, haddane talaabadii dhawaan uu qaaday Trump ee uu safaaraddiisa ugu raray Qudus ayaa ka caraysiisay dad badan.